Umgaqo-nkqubo we-RMA-Staba Electric Co, Ltd.
Buyisela ukuVunywa kokuThengiswa
Inkqubo yamabango enesiphako
I-Staba Electric Co., Ltd. (Ngokufutshane njenge-Staba) iimveliso ziyaqinisekiswa ukuba azinaziphene kwimathiriyeli nakwimisebenzi ephantsi kokusetyenziswa kwesiqhelo kwithuba lewaranti. Iimbophelelo zewaranti zeemveliso ezizezakho zilawulwa zizivumelwano ezahlukeneyo kwaye azifihlwanga kolu xwebhu.
Ixesha lewarantiNgokubanzi, iStaba ibonelela ngewaranti yeenyanga ezingama-24 ukusukela kumhla wokuhanjiswa. Ukuba ixesha lewaranti kwisivumelwano okanye i-invoice yahlukile, ikhontrakthi okanye ixesha le-invoice likhona.
Staba UxanduvaUxanduva lodwa lweStaba phantsi kwewaranti lukhawulelwe kulungiso lweziphene kusetyenziswa iindawo ezintsha okanye ezihlaziyiweyo, okanye ukutshintshwa kweemveliso ezineziphene ezibuyiswe ngabathengi abathe ngqo. I-Staba inelungelo lokusebenzisa izinto ezinokutshintsha izinto zomntu wesithathu okanye izinto ezingasafumaneki kubathengisi bokuqala.
Ukungabandakanywa kwiwaranti: I-Staba ayithathi luxanduva ngenxa yezi meko zilandelayo, apho iwaranti iyayeka ukusebenza ize iyeke ukusebenza. 1. Imveliso ifunyenwe inesiphene emva kokuba ixesha lewaranti liphelile. 2. Imveliso isetyenziswe gwenxa, impatho-gadalala, ukungakhathali, ingozi, ukuphazanyiswa, ukuguqulwa, okanye ukulungiswa okungagunyaziswanga, nokuba kungengozi okanye ezinye izizathu. Ezo meko ziya kumiselwa ngu-Staba ngokokubona kwakhe okungagungqiyo. 3. Imveliso yonakele ngenxa yeentlekele okanye iimeko ezigabadeleyo, nokuba zezendalo okanye ezabantu, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwizikhukula, umlilo, ukubetha kombane, okanye ukuphazamiseka komgca wombane. 4. Inombolo yesiriyeli kwimveliso isusiwe, itshintshiwe, okanye yonakalisiwe. 5. Iwaranti ayizukugubungela umonakalo wezinto zokuthambisa, okanye umonakalo owenzeke ngexesha lokuthunyelwa.
Iwaranti eyandisiweyo: I-Staba ibonelela ngewaranti eyandisiweyo enokuthengwa kummeli wethu wentengiso xa ufaka iodolo. Intlawulo yokuthenga iwaranti eyandisiweyo iyenyuka, ngokusekwe kwixabiso lokuthengisa lemveliso.
Ukuze uncede umthengi aqalise ukusebenza kwesiqhelo ngokukhawuleza kwaye uphephe inkcitho kwizixhobo ezingonakaliswanga, sinomdla wokukunceda ngokusombulula ingxaki kude kwaye sifune zonke iindlela zokulungisa isixhobo ngaphandle kwexesha kunye nenkcitho engeyomfuneko. zokubuyisela isixhobo kulungiso. Umthengi ubanga ingxaki, kwaye unxibelelana nommeli wentengiso weStaba okanye inkxaso yezobuchwephesha ngokunika inkcazo eneenkcukacha ngamagama, imifanekiso, kunye / okanye iividiyo. I-Staba yenza eyona migudu ilungileyo yokusombulula ingxaki kude.
Staba yamkela kuphela imbuyekezo evela kubathengi abathe ngqo. Ukuba ufumana ingxaki ngemveliso yethu nceda ubuyele apho uthenge khona.
Inombolo ye-RMA: Phambi kokuba ubuyisele iimveliso ezineziphene, umthengi kufuneka aqhakamshelane nommeli wentengiso wefom ye-RMA kunye neNombolo egunyazisiweyo ye-RMA, kwaye ugcwalise kwaye ubuyisele kubameli bezentengiso okanye info@stabamotor.com. Qaphela ukuba inombolo ye-RMA kufuneka iboniswe ngaphandle kwazo zonke iiphakheji ezibuyisiweyo. I-Staba ingala ukubonelela ngokulungiswa okanye ukutshintshwa kwemveliso ngaphandle kwe-RMA kwaye ibuyisele imveliso kuMthengi ngokuqokelela imithwalo.
Ukuphelelwa: I-RMA isebenza kwiintsuku zekhalenda ezingamashumi amathathu (30) emva kokukhutshwa nguStaba. Abathengi kufuneka babuyisele imveliso echazwe kwi-RMA ngaphakathi kweentsuku ezingamashumi amathathu (30) okanye i-RMA entsha iya kufuneka.
Isidingo sePakethe: Zonke iimveliso ezibuyisiweyo kufuneka zipakishwe ngokufanelekileyo ukuthintela ukonakala kwenqanawa.
Ukuchongwa kwemeko yesiqinisekiso: Nje ukuba imveliso ifunyenwe, uStaba umisela imeko yewaranti ngokujonga iinombolo zothotho kunye nokuchonga izinto. Into yewaranti kufuneka ilungiswe okanye ithathe indawo ngaphandle kokunxibelelana nabathengi. Ukuba into engeyiyo iwaranti ifuna ukulungiswa umthengi uthunyelwa ifomu yoQikelelo lweeNtlawulo abanokuthi bayiqwalasele kwaye bayisayine ukuba yamkelekile. Izinto ezingasebenziyo aziyi kulungiswa ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yomthengi. Ukuba into ethile ithathwa njengengalungisekiyo umthengi uqhagamshelana naye kwaye unokhetho (1) lokuba imveliso ibuyiselwe okanye (2) ukuba imveliso ikhutshiwe.
Imali yokulungisa: Into ewaranti kufuneka ilungiswe ngaphandle kwentlawulo. Into engeyiyo iwaranti kufuneka ibe yiyo ephetheyo kwimirhumo yezinto kunye nokulungisa iifizi ukuba kufanelekile.
Imirhumo yempahla: kwimeko yewaranti, uMthengi uya kuhlawula imithwalo engenayo yemveliso ebuyisiweyo kwaye uStaba uya kuhlawula umthwalo ophumayo wemveliso elungisiweyo okanye etshintshiweyo kuMthengi; kwimeko yokuphuma ngaphandle kwewaranti, umthengi kufuneka ahlawule zombini iindleko zangaphakathi neziphumayo.
Isixhobo esilungisiweyo okanye esitshintshiweyo siya kugunyaziswa ukuba ishiyeke ithuba lewaranti yentsusa okanye iintsuku ezingamashumi alithoba (90), nokuba yeyiphi na ende. Umgaqo-nkqubo unokutshintsha ngokokubona kukaStaba, nangaliphi na ixesha, ngaphandle kwesaziso sangaphambili.
Imoto, Ivacuum yococa, I-Brushless Motor, Imoto yeBLDC, I-DC engenazithuthi, I-BLDC yeFan Motor, yophando pricelist